Eventbrite: Zviitiko Chokwadi Zvakagadzirwa Nyore | Martech Zone
Eventbrite: Zviitiko Chokwadi Zvakagadzirwa Nyore
Wednesday, April 9, 2008 Svondo, Gunyana 30, 2012 Douglas Karr
Eventbrite yakavambwa mukutanga kwa2006 uye emwedzi mavhoriyamu etikiti akagoverwa atove mumamirioni nemakumi ezviuru evashandisi. Ndakaona yangu yekutanga Eventbrite kukoka kubva muchiitiko chakasimudzirwa na Chiremba Thomas Ho uye ndakazvishandisa pazviitiko zvitatu kare.
Kunyangwe yakachena, iyo interface iri diki diki. Iko kune TON yezvinhu zvakarongedzwa mune ichi chishandiso uye ndizvozvo, pasina mubvunzo, iro dambudziko rekuwana iwo akakodzera mamenyu munzvimbo chaidzo. Kana zvese zvaunoda kuita kuwedzera chiitiko nekukurumidza uye kukoka vanhu vashoma, pane yakanaka yakajeka 4-nhanho wizard.
Kana iwe uchida kuita zvimwe zvemberi sarudzo (ongororo, auto-vanopindura, makodhi ekuderedzwa), iwe unofanirwa kutsvaga zvishoma kuomarara. Ndakawana rubatsiro rwese rwandaida mumafaira avo ekubatsira uye, pamusoro pezvo, vane TON yezvidzidzo zvinobatsira!
Kana iwe uchinetseka kuti nei iwe usingaite izvi iwe pachako, pane zvikonzero zvishoma:
IMO, mukana wakakura weCustombrite ndewekuti uri kushambadzira chiitiko chako ku Zviitiko evdb (Zviitiko uye Nzvimbo Dhatabhesi). Izvi zvinokurudzira chiitiko chako kupfuura miganho yevaverengi vako uye chichiita kuti chiwanikwe kune mamwe masaiti, senge Yahoo Inouya.
Inotevera kubhadharwa kwakasimba uye system yetiketi, uyu ndiwo musoro wausingade kubata nawo iwe wega! Eventbrite kunyange ine yekudzosera mashandiro!
Iko kune toni yezvimwe zvinotonhorera maficha - akaburitswa evaenzi rondedzero, RSS inopa kune ako zviitiko, Facebook kusangana, Kubatanidzwa kwePaypal, kusangana kweGoogle Checkout, API yakasimba, nzira yekungoburitsa yako peji yechiitiko, chirongwa chekubatana… unozvitumidza! Uye, iwe unogona kuchengeta tabo pane kwavo kuvandudza kuburikidza ne Chiitikobrite blog.
Tarisa musana wako, Eventbrite!
Mira, zvakadaro! Ini ndinofanira kuongorora mamwe maemail Service Provider mafomu panguva imwechete uye TikitiMaster yaive musanganiswa. Kunyangwe isiri iro bhizinesi rinodiwa kwazvo muindasitiri yetiketi, TicketMaster inzvimbo uye ine hukasha zvakanyanya.
Handina chokwadi chekuti TicketMaster yakareba zvakadii, iine stranglehold yayo paindasitiri uye nemari yakawandisa, ichamira nekurega kutanga kukuru senge Eventbrite ichiramba ichikura mukubudirira! Vanogona kusakwanisa kubata, zvakadaro, kana Eventbrite ichiramba ichivandudza!
Tags: Chiitiko manejimendichiitiko chikuvamhinduro yechiitiko
ProBlogger: Tenga Kopi yeBhuku raDarren!
ChaCha's Shift kuMobile yaive Yakapenya
Apr 10, 2008 pa 9: 06 AM
Ndanga ndichiongorora izvi kune mutengi munguva pfupi yapfuura uye ndinoda izvo zvandinoona. Inorova kugadzira chimwe chinhu tsika.
Apr 10, 2008 pa 9: 18 AM
Ini ndaizokuratidza yakadzamidzirwa, akagadzirwa mapeji kwandakavaka tsika dhizaini, Ian, asi mutengi akabatana navo saka handisi kuzotora chikwereti. 😉